रुसी विपक्षी नेता नाभाल्नीलाई चियामा विष दिएपछि अचेत, आईसीयूमा उपचार हुँदै - DURBAR TIMES
HomeInternationalरुसी विपक्षी नेता नाभाल्नीलाई चियामा विष दिएपछि अचेत, आईसीयूमा उपचार हुँदै
रुसी विपक्षी नेता नाभाल्नीलाई चियामा विष दिएपछि अचेत, आईसीयूमा उपचार हुँदै
मस्को । भ्रष्टाचार विरोधी अभियानकर्तासमेत रहेका रुसका विपक्षी नेता एलेक्सेई नाभाल्नीलाई चियामा विष खुवाइपछि अचेत भएका छन् । अचेत भएका ४४ वर्षीय नाभाल्नीको सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) मा उपचार भइरहेको उनकी प्रवक्ता किरा यार्मिसले बताएकी छन् ।
उनका अनुसार साइबेरियाको टोम्स्कबाट विमानमा मस्को फर्किने क्रममा उनी अचेत भएका थिए । त्यसपछि विमानलाई साइबेरियाकै ओम्स्क सहरमा आपतकालीन अवतरण गराएर उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको हो । अस्पतालले उनको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहेको भए पनि जटिल भएको बताएका छन् ।
यार्मिसले ट्विट गर्दै नाभाल्नीलाई विष खुवाइएको जानकारी दिएकी छन् । उनका अनुसार साइबेरियाबाट मस्कोका लागि प्रस्थान गर्नुअघि उनले चिया मात्र पिएका थिए । चियामै केही मिसाइएको हुनसक्ने उनले आशंका गरेकी छन् ।
यात्राका क्रममा यार्मिस पनि विमानमा नाभाल्नीसँगै थिइन् । त्यतिबेला नाभाल्नीलाई अत्यधिक पसिना आइरहेको थियो । यार्मिसका अनुसार उनले ध्यान अन्त मोडिने भन्दै आफूसँग कुरा गरिरहन आग्रह गरेका थिए ।
त्यसपछि नाभाल्नी उठेर बाथरुम गएको र त्यहीँ अचेत भएका थिए । उनको ओम्स्कस्थित अस्पतालमा उपचार भइरहेको बीबीसीले जनाएको छ । नाभाल्नीले रुसमा भ्रष्टाचारविरोधी अभियानको नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका कडा आलोचकसमेत हुन् ।
नाभाल्नीले जुनमा संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रपति पुटिनलाई आगामी दुई कार्यकाल राष्ट्रपतिमा रहने बाटो खुला गर्ने विषयमा चर्को विरोध गरेका थिए । नाभिल्नीमाथि यसअघि पनि आक्रमण हुँदै आएको थियो। सन् २०१७ मा पनि उनको आँखामा केमिकल हानिएको थियो । -बीबीसी
Previous articleशान्त कुटनीति र गोप्य वार्ताले युएई–इजरायलबीच सम्झौता गराउन सफल
Next articleकाठमाडाैं उपत्यकामा २ सयसहित देशभर थपिए ७ सय ७ संक्रमित
एमाले नेताहरुको सुझाव: कार्यकारी पदमा दुई पटकभन्दा बढी रहन नपाइने, ७ उपाध्यक्ष राख्नुपर्ने
साहस उर्जाको आईपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन; कति पर्यो आवेदन ?
आजको राशिफल – १० असोज, आइतबार
यी ५ बैंकहरुले गरे लाभांश घोषण, कुनको कति ?
महिला अधिकारकर्मी कमला भसिनको निधन
लगातार ४ दिन घटेर आज बढेको नेप्सेमा यी हुन् सबै भन्दा धेरै कमाउने र गुमाउने कम्पनी
आज देशभर यी स्थानमा बत्ति जाने, यस्ता छन् कारण
आईपीओ निष्कासन गर्दै न्यादी हाइड्रोपावर
सुदूपश्चिममा भूकम्पको धक्का
बालबालिकाले टिकटक दिनमा ४० मिनेटमात्रै चलाउन पाउने !
लस्कर फुड्सले आकर्षक अफर ल्यायो
निफ्राका शेयर धनीहरुका लागि पहिलो पटक ८.५ प्रतिशत लाभांश घोषणा
कोरोना महामरीबाट रोजगारी गुमाएका ३० घरपरिवारलाई खाद्यान्न सहयोग
म्यानचेस्टर युनाइटेडको पुनरागमन जित
हुवावेकी मुख्य वित्तीय अधिकारी वानजाउको मुद्दा फिर्ता लिन अमेरिका तयार